About Kana no Mi Exhibition (Mid-term) Gallery Talk | Kumagai Tsuneko Memorial Hall
Mayelana neKhana no Mi Exhibition (Mid-term) Ingxoxo yeGalari
2021 / 07 / 28 Ukuqashwa kabusha
IKumagai Tsuneko Memorial Hall Kananobi Exhibition "Best Selection Works I Want to See Again" Gallery Talk
Ngenxa yesibalo esikhulu seziguli ezitheleleke nge-coronavirus entsha eTokyo, isimo sesimo esiphuthumayo sizophinde sikhishwe.Ngenxa yalokhu, ngoJulayi 7 (Sat) no-Agasti 24st (Sat) kukhanseliwe.Siyaxolisa ngokungalungile, futhi siyabonga ngokuqonda kwakho.
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa 7:24　Ikhanseliwe.
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa 8:21　Ikhanseliwe.
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa 9:18
NgoMgqibelo, Okthoba 3, unyaka wesithathu kaReiwa 10:16
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 3, unyaka wesithathu kaReiwa 11:20
Abantu abayi-10 njalo lapho befika okokuqala, isisekelo sokuphaka kuqala (umnqamulajuqu ngokushesha nje lapho amandla efinyelelwa)
* Isicelo se-Advance siyadingeka.
* Sicela ufake isifihla-buso, ubulale amagciwane ngeminwe yakho, bese uhlola impilo yakho njengesilinganiso sokuvimbela ukusabalala kwesifo esisha se-coronavirus lapho ungena emnyuziyamu.
Usuku lungashintshwa noma lukhanselwe ngokuya ngokusabalala kwesifo.Ngaphezu kwalokho, sicela wazi ukuthi igama kanye nemininingwane yokuxhumana yomfakisicelo ingahlinzekwa ezikhungweni zomphakathi njengezikhungo zezempilo zomphakathi lapho kudingeka.
Yisho kuze kube manje